Akụkọ Weebụ Google: Ntuziaka bara uru iji nye ahụmịhe imikpu zuru oke | Martech Zone
N'oge a, anyị dị ka ndị na-azụ ahịa chọrọ ịgbari ọdịnaya ngwa ngwa o kwere mee yana ọkachamma na obere mbọ.
Ọ bụ ya mere Google ji webatara ụdị ọdịnaya nke ha dị mkpụmkpụ akpọrọ Akụkọ Gugulu maka Gugul.
Mana kedu ihe bụ akụkọ webụ Google na kedu ka ha si enye aka na ahụmịhe na-emikpu karịa na nke ahaziri iche? Kedu ihe kpatara iji akụkọ webụ Google wee kedu ka ị ga-esi mepụta nke gị?
Ntuziaka a bara uru ga-enyere gị aka ịghọta nke ọma uru dị n'iji akuko webụsaịtị ndị a yana otu esi eji ha maka mkpa gị.
Kedu ihe bụ Akụkọ Weebụ Google?
Akụkọ webụsaịtị bụ ọdịnaya ihuenyo zuru oke maka webụ nke bara ụba na anya na-enye gị ohere ịpị ma ọ bụ pịgharịa site n'otu akụkọ gaa na nke ọzọ. Ọ dị ka akụkọ Facebook na Instagram. Enwere ihe karịrị nde 20 akụkọ webụ ndị dị n'ịntanetị na mkpokọta yana kemgbe Ọktọba 2020, ngalaba ọhụrụ 6,500 ebipụtala akụkọ webụ mbụ ha.
Ha nwere ike ịnye ụdị ọzọ maka ndị na-azụ ahịa na-etinye ọdịnaya n'oge njem ụtụtụ ha ma ọ bụ na-atụgharị na ekwentị ha n'enweghị ihe ọ bụla ka ha nọ ọdụ n'ihu ihe ngosi ha. Dịka azụmahịa, ọ nwere ike inye aka iru ndị na-ege gị ntị, ọkachasị na mmetụta Google.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji jiri Akụkọ Weebụ Google?
Yabụ kedu ihe kpatara iji Akụkọ Weebụ Google? Ha bụ ọganihu na nchọ Google nke nwere ike ịdị mma maka ịdọba ọtụtụ okporo ụzọ yana inye ọdịnaya weebụ gị ohere ịhụ ya. Enwere ọtụtụ uru nke akụkọ webụ Google nwere ike ịpụta site na iji ha yana ha ruru mbọ a chọrọ iji mepụta ha site na ọkọ.
Na-enye nkwalite maka ọkwa gị - Asọmpi ị nweta ọkwa na ibe Google dị egwu. Naanị 5.7% nke ibe ga-edokwa na nsonaazụ ọchụchọ 10 kachasị n'ime otu afọ mbipụta, ka Ahrefs siri kwuo. Akụkọ webụsaịtị Google na-enye gị ohere ịdo ọkwa mbụ na nsonaazụ ọchụchọ. Iji ọrụ Weebụ Google, n'ozuzu, nwere ike inyere gị aka ịkwado azụmahịa gị na ibe nsonaazụ ọchụchọ (Search Engine).ỌRỤ). Ime otú ahụ nwere ike iwetakwu okporo ụzọ na olileanya, ọtụtụ ahịa!
Ọdịnaya dị mfe ikekọrịta - Otu n'ime uru dị mkpa nke akụkọ webụ Google bụ na ị nwere ike kesaa ọdịnaya ahụ n'ụzọ dị mfe n'etiti ndị enyi gị n'ịntanetị, ezinụlọ na ndị ọrụ ibe gị. Akụkọ webụ ọ bụla nwere ike ịnye ọdịnaya bara uru nke onye ọrụ nwere ike kesaa ngwa ngwa n'enweghị ime tweaking ma ọ bụ dezie tupu ha pịnye òkè.
Na-enye oke ruru - Akụkọ webụsaịtị Google bụ atụmatụ emebere ya maka webụsaịtị mkpanaka n'anya. Yiri ma akụkọ Instagram na Facebook, ọ nwere ike inye ohere dị ukwuu ịmepụta na ịgbakwunye akụkọ na weebụsaịtị WordPress ha yana ngwa ndị ọzọ agbakwunyere. E gosipụtara akụkọ ndị a na nsonaazụ ọchụchọ dị maka nde mmadụ iji pịa ha, karịa naanị mmadụ ole na ole
Ọ dị mma maka nkwalite njin ọchụchọ - Nchọcha ihe nchọcha (SEO) dị mkpa maka ọtụtụ ndị mmadụ na azụmaahịa mgbe ha na-agbalị ime ka ọnụnọ ha dị n'ịntanetị ka mma. 70% nke ndị ahịa n'ahịa sị na organic search dị mma karịa akwụ ụgwọ search maka na-amụba ahịa. Akụkọ webụsaịtị Google na-ejikọta omume kachasị mma site n'ịmepụta ọdịnaya na-etinye aka karịa nke ga-edobe ọ bụghị naanị na Google Search kama site na Google Images na ngwa Google.
Enwere ike ị nweta ego Akụkọ Weebụ - Akụkọ weebụ Google na-enye ohere maka ndị na-ebipụta akwụkwọ iji nweta ego site na enyemaka nke mgbasa ozi ihuenyo zuru oke na njikọ njikọ. Ndị mgbasa ozi nwekwara ike irite uru na nke a, na-enye ahụmịhe anya karịa site na vidiyo ịkọ akụkọ.
Na-enyere aka soro ahụmịhe onye ọrụ wee tụọ arụmọrụ - Site n'ụdị ọdịnaya a, ndị na-ebipụta akwụkwọ nwere ike soro ahụmịhe onye ọrụ n'ụzọ dị mfe ma kwe ka ha tụọ arụmọrụ nke akụkọ ọ bụla ha kụrụ na-ebipụta. Ị nwekwara ike jikọta ndị a na nyiwe dị ka Google Analytics, nke dị mma maka ịnakọta ozi n'ozuzu maka weebụsaịtị gị.
Na-enye ahụmịhe mmekọrịta yana imikpu maka ndị ọrụ gị – Otu n'ime uru dị ukwuu nke akụkọ webụ Google bụ na ọ na-enye ndị ọrụ ya ahụmịhe mmekọrịta yana imikpu. Ọ na-enye onye mbipụta ohere itinye ihe mmekọrịta dị ka ajụjụ ajụjụ na ntuli aka, nke nwere ike ịgwa gị ọtụtụ ihe gbasara ndị na-ege gị ntị.
Ebee ka a na-ahụ akụkọ webụ Google?
Enwere ike inyocha akụkọ webụ mgbe na Google n'ofe ibe ọchụchọ ha, Google Discover, ma ọ bụ ihe onyonyo Google. Agbanyeghị, ọ dị mma ịmara na akụkọ webụ Google nwere ike ịhụ ugbu a maka ndị ọrụ US, India na ndị Brazil. Ọ bụ naanị obere oge n'agbanyeghị ruo mgbe nke ahụ ga-agbasa n'ihu.
Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịnọ n'otu n'ime obodo atọ ahụ, mgbe ahụ ọ ga-apụta na mmalite nke nsonaazụ ọchụchọ gị. Dị ka ọ dị mfe ịnweta ya, ị gaghị enwe nsogbu ịchọta ya.
Otu esi emepụta Akụkọ Weebụ Google?
Ịmepụta akụkọ webụ anaghị achọ ka ị nwee nnukwu nhazi ma ọ bụ ahụmịhe nka. Dịka ọ bụla n'ime nyiwe mgbasa ozi ọha na eze nwere njirimara akụkọ, ọ dị mfe ịmepụta otu. Nke a bụ ndụmọdụ ole na ole ị nwere ike ịtu aka mgbe ị na-eke akụkọ webụ mbụ gị.
Jiri ihe ndezi anya - Ngwa mgbakwunye WordPress Akụkọ Weebụ bụ ebe dị mma ịmalite.
Chee echiche banyere akụkọ - Mepụta bọọdụ akụkọ wee detuo ebumnuche gị ma ọ bụ ebumnuche gị maka ọdịnaya ahụ.
Mepụta akụkọ webụ - Were akụrụngwa gị dịnụ wee dekọọ / chịkọta akụkọ ahụ wee jiri nchịkọta ihe ngosi mepụta ya.
Bipụta akụkọ webụ - Bipụta akụkọ ahụ na Google wee lelee ka okporo ụzọ na-abata.
Ọmụmaatụ nke Akụkọ Weebụ Google
Ọ bara uru ịnwe ụfọdụ akụkọ webụ akụkọ Google ka ọ bụrụ na ị kpebie imepụta ha n'onwe gị, ị ga-enwe isi mmalite nke mmụọ nsọ iji rụọ ọrụ. Nke a bụ ọmụmaatụ ole na ole iji malite gị, pịa imepe ha.
VICE nwetara mmụọ nsọ site na ọrịa na-efe efe na ndị na-esi n'ụlọ na-esi nri nwere usoro nri iche iche dị ka egosiri n'elu. Ụzọ mara mma isi na-eri nri maka igwe mmadụ sara mbara, karịa naanị ndị na-ege ha ntị.
Onye na-achọ ihe mepụtara akụkọ webụ a, iji kesaa ihe ọmụma sayensị mana onyonyo na ederede ejiri enyeghị oke ihe. Ọ pụtara na ọtụtụ ndị nwere ike ịpị ya iji meju ọchịchọ ịmata ihe.
Akụrụngwa nkuzi nke nylon nke ọ na-enye akụkọ webụ dị n'elu na-enye ahụmịhe dị egwu maka ndị ọrụ ọ bụghị naanị site na akụkụ anya kamakwa na-enye uru.
Njirimara nke akụkọ webụ Google bụ ụzọ dị mma isi kesaa ozi n'ụzọ ọhụrụ na-akpali akpali. Ma ị bụ onye na-azụ ahịa, onye mbipụta, ma ọ bụ onye mgbasa ozi, enwere uru dị na iji usoro ịkọ akụkọ imikpu nke Google bụ akụkọ webụ ya.
Tags: nchịkọta ọdịnayaakụkọ weebụgoogleAkụkọ weebụ nke googlegoogle akụkọ ihe mere ememmekọrịtamkparịta ụka akụkọnyocha ọchụchọAagwoshareable ọdịnayaọdịnaya mmadụakụkọịkọ akụkọtrackingakụkọ weebụakụkọ weebụWordPresswordpress plugin